Uyenza njani ikhekhe lomtshato + iTutorial yeVidiyo - Ividiyo Yasimahla
Yonke into endinqwenela ukuba ndiyazile xa ndenza ikhekhe lomtshato wam wokuqala kwakhona ngo-2009. Ukusuka kwizixhobo ukuya kubuchule! Ndiphinda ndenza inhlekelele yam yokuqala yekhekhe lomtshato kwaye ndikubonisa uyenza njani ikeyiki yomtshato ngempumelelo okokuqala ngqa.
Ndikucebisa ukuba ufunde yonke iposti yebhlog ngaphambi kokuba uqale wenze ikhekhe lakho lomtshato kwaye uqiniseke ngokujonga isifundo sevidiyo ekupheleni kwesi sithuba.
Intlekele Yam Yokuqala Yomtshato
Ngokwenene ndandinebhongo ngale khekhe xa ndiyenza. Yayiyikhekhe lokuqala lomtshato endakha ndalwenza ngo-2009! Ikhekhe ibiyi12 ″ -10 ″ -8. ” Ikhekhe le-12 crack liqhekekile kuba khange ndilinganise iileya ngoko ke ndibhake entsha. Emva koko ndaqhubeka nokubeka ikhekhe elitsha WARM! Unokuyicinga into eyenzekayo emva koko. Ewe, yaphinda yaqhekeka kwakhona. UGH!
Emva koko uDan waqhuba le khekhe lomtshato lingafundanga kangangeeyure ezimbini ukuya kumtshato waselwandle ongaphandle. Amagqabantshintshi kunye nokujika kunye nokungcangcazela kweemoto kukhokelele kulowomgangatho osezantsi ujike ube sisiphithiphithi esifudumeleyo.⁠ Akudingeki ukuba uthethe, le khekhe ayenzanga kakuhle. OH izinto endinqwenela ukuba ndizazi xa ndiqala!
Andizange ndazi malunga nendlela yokubeka kunye neqabaka ikhekhe. Ungazifumana njani iikona ezibukhali okanye upholile amaqebengwana am kwaye ngokuqinisekileyo hayi indlela yokugubungela iikeyiki zesikwere kwifondant njengoko ubona ngongcoliseko lwam. Elona candelo libi kukuba bendisazi ukuba kubonakala kubi kodwa andazi ukuba ndiyilungisa kanjani.
Ukuba uyasokola ngayo nayiphi na kwezi zinto, le yiposti yakho.
Kutshanje ndithumele ifayile ye- umfanekiso kwimidiya yoluntu yale khekhe lokuqala lomtshato ukubonisa ukuba wonke umntu uqala ndaweni ithile. Abantu babehlekisa besithi mandiyenze kwakhona, ke ndaye ndawuthatha loo mngeni!
Zininzi izinto endinqwenela ukuba ngendazazile ngelo xesha. Kwakungekho ndawo zonxibelelwano endinokufunda kuzo, zincwadi kuphela! Iincwadi ezinokuthi, 'beka iileya zakho, iqabaka, kwaye uyenze ibe mpuluswa.' Andizange ndiyazi ukuba oko kuthetha ntoni kwaye kutheni iikeyiki zam zingangqinelani neefoto ezisezincwadini. Kodwa ayindimisanga haha!
Ixesha lekhekhe lomtshato
Xa ndibhaka iikeyiki zomtshato ngonikezelo lwangoMgqibelo, ndiya kuqala ukubhaka ngolwesiThathu, emva koko ndenze yonke into igutyungelwe kwaye iqatywe iqabaka ngoLwesine, ke ngoko ndinoLwesihlanu wonke wokuhombisa.
Ndihlala ndizama ukufumana iikeyiki zam zihonjiswe ngokupheleleyo kusuku olungaphambi kokuba zilunge ukuze xa ndingena ezingxakini, ndibanexesha lokuzilungisa. Nalu uluhlu lwam lwexesha elirhabaxa lokuhombisa ikeyiki yomtshato.
NgoLwesibini, ndikwajonga iiodolo zam zekhekhe kwiveki elandelayo ukubona ukuba ndifuna uku-odola nantoni na kwi-intanethi.
uLwesibini -Uphonononge uyilo lwam lwekhekhe ukuze ubone ukuba ndifuna uku-odola nantoni na kwaye ndenze uluhlu lwam lokuthenga.
uLwesithathu -Ivenkile yokuthenga izinto, yenze ukuba ndibethwe yingqele kwaye ndiyayithanda.
uLwesine -Bhaka amaqebengwana am, uwagodole kwisikhenkcezisi, uwagcwalise kwaye uwagalele crumb-coated kwaye uphumle kwifriji.
uLwesihlanu - Faka isicelo sebhatyi yokugqibela kwiikeyiki kwaye uzigcine kwifriji. Yenza i-buttercream flower uze uzifake kwifriji. Hlanganisa kunye nokuhlobisa ikhekhe.
uMgqibelo - Hambisa ikhekhe. Ngokucacileyo, ukuba ikhekhe lakho lifanelekile ngolunye usuku unokulungelelanisa eli xesha.
Yintoni ekufuneka uyenzile ukuba ube nekhekhe lomtshato
Yile nto bendisenza yona le kaka yomtshato. Ewe kunjalo, ukuba usebenza uyilo lwakho, unokufuna iibhodi ezinobungakanani obahlukeneyo, imibala okanye izixa zekhephu / ikeyiki.
Ndazogquma iikeyiki zam ndonwabile ndisebenzisa indlela ye-paneling kodwa ungasebenzisa indlela enye.
Ikhekhe elimhlophe iileya, kubhakwa, kubanda kubanda kwaye kusongelwe (ndenze iibhetshi ezimbini zekhekhe elimhlophe ukufumana ezimbini ze-10 ″, ezimbini ze-8 ″ kunye ne-6 ″ ezikwere zesikwere.Zonke zi-2 ″ ubude.
Iilitha ezili-10 ze mhlophe (Ndenze iibhetshi ezimbini ze-LMF Marshmallow Fondant yam okanye ungasebenzisa nayiphi na into oyithandayo ethengwe yivenkile oyithandayo. Ndikhetha uphawu lweRenshaw Americas.
I-buttercream elula (Ndenze iibhetshi ezimbini zokukhenkceza)
ndidla ngoku iiacrylics ukufumana iikeyiki zam isikwere sokwenyani kodwa kufanelekile. Unokuzama ukukhenkceza iikeyiki zakho nge indlela ejonge ezantsi endikhe ndayisebenzisa iminyaka kodwa ndithatha ixesha elide.
10 ″, 8 ″, kunye no-6 pans iipani zekhekhe zesikwere, 2 ″ ubude. Ndineepani zemigca yomlingo.
10 ″, 8 ″, kunye no-6 ″ ii-acrylics ezikwere (ukhetho)
Intsimbi entsha kraca
Iikhadibhodi zekhekhe zesikwere (Ukuba usebenzisa ii-acrylics, sika iibhodi zakho zibe yi-9.5 ″ X 9/5, ”7.5 ″ X 7/5,” kunye no-5.5 ″ X 5.5 ″)
Imela enkulu eneserver
Iitroxo ezomeleleyo zeplastiki zobisi
Iibhodi zekhekhe zomthi eziyi-12 okanye igubu lekhekhe (Ndiyathanda Iibhodi zekhekhe ezikhoyo Sukusebenzisa ikhadibhodi edadayo ukuxhasa ikhekhe lakho elinemigangatho emi-3 okanye inokuqhekeka ize iwe)
Iingcebiso zokubhabha zeentyatyambo zebhotela emnandi - # 4 ngeenxa zonke, # 366 incam yamagqabi amancinci, # 104 incam yetafile
Ukuguqulwa kwandiswa (ngokuzithandela kodwa yenza kube lula ukukhenkceza umaleko omkhulu)
Uyibhaka njani iileya zekhekhe lomtshato
Ndisebenzisa eyam iresiphi yekhekhe emhlophe kodwa nayiphi na iiresiphi zam zokupheka zinokusetyenziswa endaweni yoko. Eminye imigaqo esisiseko yokubhaka iileya zekhekhe lomtshato ngempumelelo.
Sebenzisa iipane zekhekhe ezisemgangathweni. Ndiyathanda Utata otyebileyo okanye umgca womlingo Ukuqinisekisa iikeyiki ezibhakwe ngokulinganayo ezinemiphetho ethe nkqo.
Ukuxutywa kwebhokisi kunokuba lula ukuyisebenzisa kodwa kukhanya kwaye kuyabutheka kuyawa ngokulula. Ukuba ufuna ukusebenzisa umxube webhokisi, zama INKUNKUMA enebhotolo eyongeziweyo kwaye yenza ikhekhe ukuba ibe nkulu ngakumbi ifane nokuzenzela.
Ndizalisa iipani zam malunga no-3/4 ngendlela egcweleyo kwaye ndiyathanda ukulinganisa ipani nganye ukuze ndiqiniseke ukuba bonke banenani elifanayo le-batter yekhekhe ukuze babhake ngokulinganayo kwaye baphele ngokulingana.
Emva kokuba ubhake amaqebengwana akho, mayeke apholile kangangemizuzu eli-10-15 epanini ngaphambi kokuba uwaphose kwindawo yokupholisa ukupholisa yonke indlela. Emva koko zisongele ngokusongelwa ngeplastiki kwaye ubande ubusuku bonke efrijini okanye ubambe ngokukhawuleza kwiyure enye ngaphambi kokufaka i-crumbcoat.
Ungayiqabula njani iQabane leKhekhe loMtshato
Ukufumana umaleko wokugqibela webhotela emnandi kungathatha ixesha elide kunokuba ucinga. Zinike ixesha elininzi lokubandayo lonke uluhlu lwakho kwaye unike ixesha elifanelekileyo lokuphola. Xa usafunda, kungathatha iyure nganye. Sukuba nexhala, uya kukhawuleza uzilolonge.
Gcina iikeyiki zakho zigcinwe kwifriji. Nje ukuba amaqebengwana akho abe ne-buttercream kuwo akhuselekile ekomeni ukuze ungakhathazeki ukuba kufuneka babe kwifriji kangangeentsuku ezimbalwa.
Nciphisa imida emdaka emacaleni, phezulu nasezantsi kweekhekhe zakho zekhekhe ezibandayo.
ISENZO 2 'ikeyiki layer sakho kwisiqingatha ubude-olumkileyo ngemela wona aqoqiwe.
Beka umaleko wakho wokuqala wekhekhe kwikhadibhodi ejikelezayo, unamathele kunodoli omncinci webhotela.
Yongeza i-buttercream ngaphezulu kocwecwe lwekhekhe kwaye ugudise nge-spatula ye-offset. I-buttercream yakho kufuneka ibe malunga ne-1/4 ″ ubukhulu. Zama ukugcina umaleko wakho weqabaka ulinganayo. Qhubeka kunye namanye amacwecwe akho ekhekhe.
Gubungela uluhlu lwakho lwekhekhe kumaleko obhityileyo webhotela emtyibilikisiweyo. I-crumbcoat itywina kuzo zonke iimvuthuluka zekhekhe lakho. Gcina kwifriji ukuze ubande de uqine okanye ubusuku bonke.
Faka umaleko wakho wokugqibela webhotela kunye nokugcina ikhekhe kwifriji ukuze ubande.
Ngaba uyafuna ukwazi ngakumbi malunga neziseko zokwenza ikhekhe lakho lokuqala? Bukela isifundo sam ukuhombisa ikhekhe lakho lokuqala .
Uyigubungela njani iQabane loMtshato kwiFondant
Kuwo onke amaqebengwana am omtshato ophakamileyo, ndiza kusebenzisa izinto zam zasekhaya I-LMF marshmallow ifondant iresiphi okanye ukuthanda kukaRenshaw eMelika. Zombini ezi zinto zilula kakhulu ukusebenza nazo, kwaye zinencasa elungileyo!
Iingcebiso zokugubungela ngempumelelo ikeyiki kwifondant
Sebenza ngekhekhe ebandayo kwaye usebenze ngokukhawuleza. Ukuba uneswekile kakhulu kwi-fondant, sebenzisa i-cornstarch poof ukuze uthule umphezulu.
Sebenzisa izithambisi ezimnandi ukuze uphume imibimbi kunye nokungafezeki.
Soloko ubeka imeko yakho yothando ngaphambi kokuyikhuphela ukunciphisa isikhumba kunye nendlovu.
Thatha isigqibo sokuba uyafuna na iphaneli ikeyiki yakho okanye ikhava yakho isiqwenga esinye sothando .
Gcina iikeyiki ezithandekayo ezifakwe kwifriji.
Ugcina njani iithayile zekhekhe lakho lomtshato
Gcoba iikeyiki zakho ezithandekayo kwifriji. Ndigcina eyam kwifriji yendawo yokuhlala eneshelfu ehlengahlengisiweyo kwaye akukho siqandisi. I-thermostat isetwe kwindawo eshushu epholileyo ukuze iikeyiki zam zihlale zibanda kodwa zingabandi i-SUPER. Oku kunciphisa ukufinyama xa ubakhupha kwifriji.
Xa uzikhupha ngaphandle kwefriji zinokufumana umphunga phezu komhlaba kodwa ziyeke zome ngokwendalo. Ukuxinana akuyi kuyilimaza ikeyiki.
Izinto onokuzenza ukunciphisa ukubila:
Beka ikhekhe lakho kwibhokisi yekhadibhodi kwaye uyibeke efrijini ukuze xa uyikhupha, ukufuma kuhlale ngaphezulu kwekhadibhodi hayi kwikhekhe lakho. Unokuba nefeni evuthela ngaphezulu kwekhekhe lakho, kwaye vumela amanzi kwikhekhe yakho aphume ngokukhawuleza.
SUKUYIBAMBE into oyithandayo okanye ukungxola ngayo xa ubila.
Ukuhambisa ikeyiki ebandayo kulula kakhulu kwaye kukhuselekile ukuthuthwa kuneqebengwana elingafakwanga ubuchule. Iya kujongeka icoceke kakhulu, icocekile kwaye kuya kuba lula ukuyibeka.
Ukudibanisa iTake Cake Tiers
Ukuba ikeyiki inamanqanaba amathathu okanye ngaphantsi, ndiza kuyigcina ekhaya ngaphambi kokuba ihanjiswe. Ndiyazi ukuba ndinokuphakamisa ikeyiki enamacala amathathu ndedwa kwaye indongela ixesha lokuhanjiswa.
Ngamanye amaxesha, uyilo lwam lwekhekhe likwafuna ukuba ndibeke ikhekhe kuqala ngaphambi kokuba ndihombise ukuze ndingabi nakhetha.
Ngaba amaqanda anyanzelwe e-us
Qiniseka ukuba ucinga ngale nto xa ukwinkqubo yokuyila. Kuya kufuneka ukuba utshintshe uyilo lwakho ukuba kuya kufuneka uhlanganisane kwindawo leyo.
Qiniseka ukuba imigangatho yakho yekhekhe ilinqanaba, ibandisiwe kwaye kukho ikhadibhodi yekhekhe phantsi komgangatho ngamnye.
Beka ipani yekhekhe elinganayo nenqanaba lesibini ngaphezulu kwenqanaba elingaphantsi kwaye ulandele ulwandlalo.
Faka ingca eshinyeneyo yobisi embindini uze uphawule apho ilingana khona nomphezulu wekhekhe ngomnwe wakho. Coca umququ kwiindawo eziphakamileyo ezifanelekileyo.
Sebenzisa isikhokelo sam senkxaso yekhekhe ukuqinisekisa ukuba ufaka iindiza kwindawo efanelekileyo.
Beka amaqebengwana ngokunyusa umda nge-offset spatula yakho yokuqala ukuze ufumane izandla zakho phantsi kwetrayi, emva koko uphile ngononophelo kwaye ubeke ngaphezulu kweendiza.
Gcwalisa naziphi na izikhewu phakathi komtya kunye nomgca webhotela.
Okukhethwa kukho: Sebenzisa idowel embindini wawo onke amaqebengwana akho ukugcina ikhekhe ingaphumli. Khazimla isiphelo sedreyini yomthi ye-1/2 ″. Cofa idowel phantsi kwithayile ephezulu yekhekhe yonke indlela de ifike kwibhodi yekhekhe engezantsi. Nciphisa ukugqithisa. Fihla umngxunya ngaphezulu ngebhotoloyama.
Ngaba ufuna ukufunda indlela yokwenza ikhekhe lomtshato elijikelezayo? Bukela eyam I-marbled tutorial yekhekhe lomtshato
Ukuhombisa ikhekhe lakho lomtshato
Zininzi iindlela onokuhombisa ngazo ikeyiki yomtshato. Ndizama ukwenza uyilo olufanayo kwikhekhe lam lokuqala ukuze ndenze iintyatyambo zebhotoloya.
Ndiyenzile eyam iintyatyambo zebhotela kusasa kwaye emva koko wazifaka kwisikhenkcezisi de ndizidinge.
Emva kokuba ikhekhe yam ifakiwe, ndiza kuyilungisa ikhekhe. Inqanaba eliphakathi ligutyungelwe kwimibhobho yebhotolo ebusy usebenzisa i # 4 ingcebiso ejikelezayo yombhobho.
Ndathambisa iqabaka yam iintyatyambo zebhotela ikeyiki kunye dab ye buttercream. Ndizamile ukwenza ukuhamba okufanayo kweentyatyambo ezantsi kweekona zekhekhe. Ukutshintsha iintyatyambo ezimnyama kunye neentyatyambo ezikhanyayo.
Nje ukuba ikhekhe lam ligqitywe, ndiyibuyisele yonke into efrijini ukuze ihlale ibanda.
Ukuhambisa ikhekhe lomtshato
Ukuhambisa ikeyiki inokuba yeyona nto ixinzelelekileyo kuyo yonke le nkqubo. Iikeyiki zezona zikhuselekileyo zihanjiswa kumgangatho othe tyaba. Musa ukubamba ikeyiki ethangeni lakho. Kuyinto engenakwenzeka ukugcina inqanaba lekhekhe kunye nobushushu bomzimba wakho kuya kuyifudumeza ikhekhe.
Iikeyiki kufuneka zipholile kakuhle ngaphambi kokuba zihanjiswe kwaye zihanjiswe kwisithuthi esibanda kakhulu, esinomoya opholileyo.
Bendihlala ndisa iikeyiki zam ngaphakathi iibhokisi zokwenza ekhaya kodwa ngoku ndisebenzisa ikhekhe ikhuselekile enebhonasi eyongeziweyo yenkqubo yedowel esembindini ethintela iikeyiki ekuweleni ngexesha lokuhanjiswa.
Ukuba ubeka ikhekhe yakho kwisiza, zinike ixesha elininzi (ubuncinci iyure) ukuze ikhekhe idityaniswe, izithuba zizaliswe kunye nemihlobiso esetyenzisiweyo. Xa kufuneka ndibeke iintyatyambo ezintsha kwikhekhe lomtshato Kungandithatha iyure nje ukulungiselela iintyatyambo endizishiyelwe yimbali.
Musa ukuhambisa kwangoko kakhulu. Ufuna ikhekhe ukuba ihlale kubushushu begumbi iiyure ezimbalwa kuba ibhotolo kwikhekhe inzima ukusuka kwifriji. Ibhotolo enzima ayinambitheki kakuhle. Kodwa ukuba ulahla ikeyiki kwigumbi elishushu kwaye sele iyure eziyi-8, ikeyiki inokujinga kwaye igalele. Ndidubula iiyure eziyi-1-2 ngaphambi komsitho kwaye ndicebisa ngokuchasene nokushiya ikeyiki kwindawo eshushu.
KUTHI, ndiyazi ukuba ibiyitoni yolwazi kodwa ukwenza ikeyiki yomtshato akukho lula njengokuba amanye amanqaku esenza isandi. Ukuqala kwam ukuzama ukufunda ukwenza ikhekhe lomtshato, yonke into endiyifundileyo yenza ukuba izwakale ilula kakhulu kodwa xa kuvela iingxaki, ndiye ndabona ukuba andinalo lonke ulwazi endiludingayo ukuze ndiphumelele.
Ndiyathemba ukuba le post inde ayikudimazanga ekwenzeni ikhekhe lomtshato. Njengoko ubona, bendingeyongcali xa ndizama ikhekhe lam lokuqala kodwa uyalunga. Nabani na angenza umtshato omhle.
Chaza into oyifunayo ukubhaka ikeyiki
kwenzeka ntoni ngomgodi olulamileyo kunye nenicki minaj
ithini i-nf emele umxhasi